१० प्रतिशत नाफा बढाएको शिखर इन्स्योरेन्सकाे अन्य सूचक निकै कमजोर ! - Arthatantra.com
१० प्रतिशत नाफा बढाएको शिखर इन्स्योरेन्सकाे अन्य सूचक निकै कमजोर !
काठमाडौ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा शिखर इन्स्योरेन्सले ३६ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ कमाएको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १०.२६ प्रतिशतले बढी हो ।
गत आवको सोही अवधिमा ३२ करोड ९५ लाख १८ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । यो अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख २४ हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीको जगेडा कोष ७६ करोड ५६ लाख ५१ हजार रुपैयाँबाट घटेर ६१ करोड ७६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो अवधिमा कम्पनीका बिमा कोषको आकार १ अर्ब २३ करोड १९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
कम्पनीले यो अवधिमा १ अर्ब ८ करोड २४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको इन्स्योरेन्सको प्रतिसेयर नेटवर्थ २१६ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा प्रतिसेयर आम्दानी र प्रति सेयर नेटवर्थ घटेको छ ।
गत आवको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी र नेटवर्थ क्रमशः ४३ रुपैयाँ ९ पैसा र २८४ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको थियो । यो अवधिमा पुनर्बीमा कमिशन आय पनि २.४० प्रतिशतले घटेर ४६ करोड ४९ लाख १ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ वैशाख ३० बिहीवार १०:०४ मा प्रकाशित
News Views: 98
अघिल्लाे साढे ५० करोड नाफा कमाएको नेपाल लाइफले भुक्तानी गर्न बाँकी दाबी रकम १ अर्ब ४६ करोड
पछिल्लाे उद्योग वाणिज्य महासंघले आजदेखि आइशोलेसन सेन्टर संचालनमा ल्याउने